Sheekh Yuusuf Axmed Diidaat oo wadanka Koonfur Afrika ugu geeriyooday dhaawacii soo gaaray.
Qarax 10 Askari lagu dilay oo ka dhacay deegaanka Buula Guduud ee duleedka Kismaayo.
Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday wadanka Turkiga.
Shaqa joojin looga dhawaaqay gobolka Oromia ee dalka Itoobiya.
Gaadiid urarnaa ciidamada Mareykanka oo lagu gubay Koonfurta dalka Ciraaq.
Ciidamada Itoobiya oo hawada ka saaray isgaarsiinta degmada Xudur.
Al Shabaab oo Todobaadkii Tagay Fuliyay Silsilado Weeraro ah [Akhriso].
Saturday January 18, 2020 - 10:50:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Allaha unaxariistee waxaa dhaawac culus oo soo gaaray ugeeriyooday Sheekh Yuusuf Axmed Deedaat oo kamid ahaa ducaadda muslimiinta ee ugu caansan qaaradda Afrika gaar ahaan Koonfurta qaaradaasi.
Qoyska Sheekha ayaa ku dhawaaqay in gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha uu Daaci Sheekh Yuusuf ku dhintay Isbitaalka weyn ee magaalada Ferulam, wiilka uu dhalay Sheekh Yuusuf ayaa sheegay in aabihiis uu u dhintay dhaawacii cuslaa ee loo geystay habeenkii khamiista.
Boqolaal kun oo qof ayaa magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika uga qeyb galay janaaso sheekh Yuusuf loo sameeyay, saraakiisha Booliska dowladda Koonfur Afrika waxay sheegeen in ay wadaan baaritaanno ku aaddan sababta sheekha loo dilay iyo cidda dishay.
Allaha unaxariistee Sheekh Yuusuf waxaa dhalay Sheekh Axmed Deedaat oo ahaa daaci caan ka ahaa qaaradda Afrika islamarkaana ay gacantiisa ku islaameen boqolaal kun oo qof kadib markii uu dacwada islaamka ku faafiyay inta badan wadamada dhaca Koonfurta iyo bartamaha Afrika.
Sheekh Axmed Deedaat ayaa caan ku ahaa doodo uu lageli jiray baadariyaasha Yahuudda iyo Nasaarada isagoona fadeexadeyn jiray khurraafaadka ay gaaladu ku doodo, wuxuu ku guulaystay in kumamaan kun oo gaala ahaa uu ku qanciyo diinta islaamka ayna ku xuroobaan Jowrkii kaniisadaha ayna galeen nuurka Islaamka.
Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo iyagoo ciidamo wata ka degay Dhuusamareeb.
Sarkaal katirsanaa Melleteriga dowladda oo lagu dilay Tabeelaha Sheekh Ibraahim.
Dowladda Kenya oo ku dhawaaqday in ay qaadday Bandawgii wadanka saarnaa.
Shabeel qof ku dilay caasimadda wadanka Switzerland.
Abiy Axmed oo sheegay in ay udiyaar garoobeen dagaal iyo Kacdoonada oo wali sii socda.
50 qof Itoobiyaan ah oo ku dhintay Rabshadaha ka socda wadanka Itoobiya.
Weeraro lagu miray saldhigyo ciidamada Itoobiya iyo Kenya ay ku leeyihiin Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
ITOOBIYA OO KU GUULEYSATAY MURUQTUUJINTA AMA HAYMANADA (HEGEMONY) GEESKA AFRIKA.